Shangu dzefreezer → Zvipfeko zvezvitoro zvinotonhora • P & M machira emakomputa
Maharaiza shangu dzemamiriro akanyanyisa
Mudhipatimendi zvipfeko zvema freezer nezvitoro zvinotonhora kune firiji shangu chikamu. IN shangu chikamu isu tinopawo masokisi ekupisa akasungirirwa akagadzirirwa kushanda munzvimbo dzakadzika tembiricha. Shangu dzakasimba, dzakasimbiswa seams uye yekuwedzera gluing chivimbiso chekuchengetedza uye kunyaradza. Iyo shangu hadzina chete chete nehunhu hwakashandurwa kuti ushande mumafiriza uye makamuri anotonhora, asi zvakare tarisa echazvino.
BERING BIS inotonhora bhutsu
Yakakwira mhando yekunyaradza uye chengetedzo
Tsoka ndeimwe yemitezo yemuviri inowanzo tenderera kutonhora, ndosaka zvakakosha kuti uzvidzivirire zvakanaka kune avo vese vanoshanda kwemaawa akawanda zuva rega rega mumakamuri umo tembiricha dzinodzikira kusvika -45 degrees Celsius.
Pamusoro pekureruka uye kunyaradzwa kwehukuru hwakasarudzwa zvakafanira, shangu dzinofanirwa kupa dziviriro inoshanda kubva kuchando. Tichifunga izvi, takave nechokwadi chekuti mhando dzakasiyana dzakabuda mukupa.
Iyo yekupa inosanganisira isina mvura inotonhora chitoro shangu dzakagadzirwa nemombe yematehwe senge BCW yakadzivirirwa bhutsu, bvudzi bhutsu BCU. Isu zvakare tine isingaite mvura inotonhora chitoro bhutsu BERGIN BIS yakagadzirwa nemusanganiswa wePU inoshingirira kune tembiricha yakaderera kusvika - makumi matatu. Mhando dzinodhura zvakanyanya idombo reRockfall.
Shangu Dombo reAlaska Coldstore dzinopa dziviriro pakudonha pasi kusvika -40 madhigirii, dzakagadzirwa neganda rezviyo remhando yepamusoro, rinofema uye risingapinde mvura. Pamusoro pezvo, ivo vane Thinsulate® B600 inodziya yega, iyo inopa kwakanyanya kupisa uye kusununguka kwekupfeka.
Zvigadzirwa zveRockfall zvinowanikwa kuodha mukati memazuva manomwe ekushanda, sezvo achitumirwa kubva kudura redu muEngland.
ROCKFALL Alaska COLDSTORE inotonhorera chitoro shangu dziviriro pasi -40 ° C
Pamusoro peshangu dzinobatsira pabasa, tinopawo masokisi akasungika, zvinoenderana nemhando yakagadzirwa neshinda, nylon kana chishongedzo chakarukwa. Iko kuwanikwa kwakawanda kwemazana kunokutendera kuti usarudze chigadzirwa chevakadzi nevarume.
Iko kupihwa kwechitonho chitoro zvipfeko zvinosanganisira zvigadzirwa zveiyo yakazara seti yezvipfeko kune iye mushandi. Kune mamwewo matabo muchitoro bhurugwa, majaketi, magurovhosi i zvivakwa yezvitoro zvinotonhora uye mafiriza.
Shangu dzeColdstorechando chitoro bhutsuchando chitoro bhutsushangu dzekuchengetedzaShangu dzakadzivirirwaRockfall bhutsushangu kune yakaderera tembirichanyanzvi shangu